Daawo Baarlamaanka Galmudug oo maanta ansixiyay in 10-ka bisha soo socoto April ay dhacdo doorashada madaxweynaha Galmudug | Ximan iyo Xeeb
Home CADAADO Daawo Baarlamaanka Galmudug oo maanta ansixiyay in 10-ka bisha soo socoto April ay dhacdo doorashada madaxweynaha Galmudug
Kulan maanta Xildhibaanada Galmudug ay ku yeesheen magaalada Cadaado ayay ku ansixiyeen in doorashada madaxweynaha Galmudug ay dhacdo 10-ka bisha soo socota ee April.
Doodda Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir. Go,aanka baarlamaanka Galmudug ayaa iska diiday codsi uga yimid DF Somalia kaasoo ay dawladu ku dalbatay in doorashada dib loogu dhigo muddo 45 cisho ah si ay uga qayb qaaataan doorashada isla markaasna sida ay hadalka u dhigeen ay u dhacdo doorasho loo wada dhanyahay, taas uu micnaheedu yahay in doorashada laga qayb galiyo kooxda Ahlusunna sheegata ee Dhuusamareeb.
Kooxda ka arimisa degmooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb waxay sheegtaan in ay maamulaan gobolada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan mana aqoonsana maamulada ka jira deegaanadaas ee shacabka Somaliyeed iyo caalamku wada aqoonsanyihiin.
Dhinaca kale mowqifka baarlamaanka Galmudug ayaa u muuqda mid ay ku diidayaan arimaha nuucaan ah waxayna horay u sheegeen in kooxda Ahlusunna ay ku soo biiraan maamulka Galmudug haddii kale ay meeshooda godoon ku ahaadaan. Haddii dawladda dhexe ay heshiis la gashay Alhusunna waa in uu ahaadaa mid ku salaysan rabitaanka shacabka Galmudug mana dhici karto in koox xagjir ah loo hakiyo dhisamaha iyo horumarka gobolka.